Maxaa kasoo baxay shirkii Golaha wasiirada? [Heshiis dhex maray Somalia & Turkiga oo lagu ansixiyey] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxaa kasoo baxay shirkii Golaha wasiirada? [Heshiis dhex maray Somalia & Turkiga oo lagu ansixiyey]
Golaha wasiirrada xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta yeeshay shir toddobaadkii uu golaha yeesho maalinta khamiista ayaa ansixiyay heshiis is afgarad oo u dhaxeeyay wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo wasaaradda Shaqada, Daryeelka Bulshada iyo Qoyska ee Jamhuuriyada Turkiga.
Is afgaradka oo ku saabsan qaybaha shaqada iyo shaqaaleynta,una dhexeeya dowladda Jumhuuriyada Turkiga iyo dowladda Federaalka ee Jamhuuriyada Soomaaliya ayaa dhinacyada waxaa ay iska kaashanayaan taququsyada la xiriira shaqada iyo shaqaaleysiinta. Labada wasaaradood waxay is dhafsan doonaan dokomiintiyada iyo macluumaadka la xiriira shuruudaha iyo wax ka beddelkooda,iyada oo guddi wada-jir ah uu ka shaqeynayo fulintinta iyo xaqiijinta arrimaha la xiriira heshiiska. Heshiiskan is afgaradka ah ayaa horay waxaa u ansixiyay golaha wasiirrada ee Jamhuuriyada Turkiga.
Golaha Wasiirrada ayaa sidoo kale bogaadiyey Guulaha Ciidanka Xoogga dalku kasoo hooyeen Dagaalkii Alshabaab kusoo qaadeen Awdheegle iyo howl-gallada ka socda Gobolka Sh/hoose.
Wasiirka Warfaafinta Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in goluhu uu si gaar ah u bogaadiyay guulaha ay ciidanku kasoo hooyeen dagaalkii degmada Awdheegle iyo jabka ay gaarsiiyeen argagaxisada.
Previous articleAU, IGAD and UN Senior representatives engage with stakeholders on Jubaland’s electoral process
Next articleWakiilka UN-ka & Beesha Caalamka oo War Culus kasoo saaray Doorashada Jubbaland [Akhriso]